Chelsea sideedii kulan ee ugu dambeysay Premier League ( Warbixin) - Radio Risaala: Somali News Online
Chelsea sideedii kulan ee ugu dambeysay Premier League
15 Diseembar Wolves 2-1 Chelsea L
21 Diseembar Chelsea 3-0 West Ham W
26 Diseembar Arsenal 3-1 Chelsea L
28 Diseembar Chelsea 1-1 Aston Villa D
3 Janaayo Chelsea 1-3 Man City L
16 Janaayo Fulham 0-1 Chelsea W
19 Janaayo Leicester 2-0 Chelsea L
Lampard ma uusan la saxiixan hal ciyaaryahan intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay iyadoo kooxdu ay saarneyd cunaqabateyn dhanka suuqa kala iibsiga ah, laakiin wuxuu in ka badan 200 milyan oo ginni ku qarash gareeyay toddobo saxiix oo waa weyn xagaagii lasoo dhaafay, waxaana kamid ah £ 45m oo Leicester kaga yimid Ben Chilwell, 71m oo khadka dhexe ah Kai Havertz kaga yimid Bayer Leverkusen.
Waa lacagtii ugu badneyd ee ay Chelsea qarash gareyso hal xagaa, taasoo ka dhigan in kabadan lacagtii 186m oo ay kooxda bixisay bilowgii xilli ciyaareedkii 2017-18.
Lampard waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda kooxda Chelsea, isagoo 211 gool u dhaliyay kooxda intii u dhaxeysay 2001 iyo 2014, sidoo kale wuxuu kaalinta 7-aad kaga jiraa liiska ciyaartoyda ugu safashada badan England, isagoo 106 kulan u saftay xulkiisa in ka badan 15 sano oo uu u ciyaarayay.
Intii lagu jiray 13 xilli ciyaareed oo uu ciyaaryahan ka ahaa Stamford Bridge, wuxuu saftay 648 kulan wuxuuna kula guuleystay 11 koob oo waa weyn – oo ay ku jiraan afar horyaal oo Premier League ah iyo 2012 Champions League.
Shaqadiisii ugu horreysay ee maamul wuxuu ka qabta Derby. Hal xilli ciyaareed oo uu shaqada hayay, waxa ay gaareen ciyaarta play-off-ka Championship, halkaasoo ay uga badisay Aston Villa oo usoo gudubtay horyaalka heerka koowaad ee England.
Lampard ayaa noqday tababarihii 10-aad ee buuxa ee uu magacaabay Abramovich tan iyo markii uu bilyaneerka iibsaday kooxda Chelsea noqday sanadkii 2003.
Sida laga soo xigtay saxafiga dhaqaalaha kubada cagta ku taqasusay Kieran Maguire, Abramovich wuxuu 110 milyan ginni ku qarash gareeyay ceyrinta maamulayaasha ka hor inta aan Lampard shaqada laga ceyrin.
Iyagoo ku dhameystay 66 dhibcood xilli ciyaareedkii hore ka dib 20 guul iyo 12 guuldarro, Chelsea ayaa laga badiyay lix jeer 19 kulan oo furitaanka horyaalka ah xilli ciyaareedkan.
Lampard celcelis ahaan dhibcaha kulan kasta uu helaya ayaa ahaa 1.67 waana kii ugu hooseeyay ee tababare kasta oo Chelsea ah Premier League.
Intii lagu jiray waagii Abramovich, kaliya Andre Villas-Boas (47.5%) ayaa ka guul liitay Lampard oo helay 52.4%,
Marka la barbardhigo, heerka guusha Jose Mourinho ee tartamada oo dhan muddadiisii ugu horreysay ee uu qabtay Chelsea waxay aheyd 67.03%, halka Sarri, Antonio Conte, Avram Grant, Carlo Ancelotti iyo Claudio Ranieri ay dhammaantood leeyihiin guulo ka badan 60%.
Lampard in la ceyriyay waxa sabab u ahaa kooxda oo aan arkin isaga isbedelaya qaab ciyaareedkiisa.
Ka dib u soo bixitaankii Champions League xilli ciyaareedkii hore waxay kooxdu qarash gareysay in ka badan 200 milyan ginni
Inkasta oo xiriir la sameyn doonaan Tuchel oo loo arko mid wax ka bedeli kara qaabka liita ee ragga reer Jarmal Kai Havertz iyo Timo Werner, isbedelka waxaa loo sameeyay sababl xiriirta kalsooni darrada kooxda oo dhan.
Waxaa la rajeynayaa in Tuchel uu dib u cusbooneysiin karo koox shan dhibcood ka baxsan afarta sare, waxaana lagu dhawaaqi karaa magcaabistisa 24 saac gudahood.
Go’aanka lagu ceyriyay Lampard wuxuu ahaa mid aad ugu adag Abramovich, kaasoo aan waligiis ka hadlin ceyrinta macalimiinta lakiin lagu qassbay inuu kani ka hadlo.
Musharaxa madaxweynaha Barcelona Joan Laporta ayaa u sheegay Paris Saint-Germain inay tusto ixtiraam badan.
Waxay ka dambeysay tani markii madaxa PSG oo uu ugu horeeyo Leonardo uu qiray inuu si dhow ula socdo xaalka Lionel Messi.
Xiddiga reer Argentine ayaa arki doona qandaraaskiisa Barcelona oo dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedkaan, Parc des Princes ayaana ah meesha ugu macquulsan ee uu tagi karo
“Waxaan ka codsaneynaa PSG inay ixtiraamto Barca, oo aysan isku dayin inay qalqal geliso,” ayuu RMC u sheegay musharax Laporta.
Tababaraha West Ham David Moyes ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu lasoo saxiixdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Jesse Lingard ka hor dhamaadka bishaan Janaayo.
Lingard, oo 28 jir ah, ayaa si liidata hoos uga dhacay qaa ciyaareedkiisa tn iyo markii Ole Gunnar Solskjaer yimid, waxaana uu miisaamayaa xulashooyinka uu kaga tagi karo kooxdiisa.
Looma magacaabin kooxdii garaacday Liverpool koobkii FA Cup axadii, taa bedelkeedana wuxuu tababaro la qaatay ciyaartooy dhalinyarada ah.
Newcastle iyo West Brom ayaa lagu tiriyaa inay xiiseynayaan ninka reer England, kaasoo hoos u dhac weyn kujiro.
Laakiin Moyes ayaa sidoo kale kormeeraya ciyaartoygiisii hore wuxuuna qarka u saaran yahay inuu geeyo London Stadium.
David Moyes ayaa soo bandhigay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan heshiiska uu Declan Rice ugu biirayo Chelsea ka dib ceyrintii Frank Lampard.
Wax saameyn ah kuma yeelan karto arinkiisa macalin ka tagay Chelsea ama mid yimid markasta oo wadahadalku socdo wuxuu ku dhawyahay Chelsea ayuu yiri Moyes.
Mustaqbalka Kylian Mbappe ayaa su’aal culus laga qabaa.
Iyadoo kaliya 18 bilood ay ka harsan yahay qandaraaskiisa, PSG ayaa laga yaabaa inay ku qasbanaato inay iibiso xagaaga.
Laakiin halka uu u socdo, Real Madrid, waxay umuuqataa inaysan u badneyn sidaas.
Dhaqaale ahaan way dhibtoonayaan sida ay wararku sheegayaan kooxaha waxay u egtahay in dhaqaaluhu shaqeyn doonin waqtigaan.
Marka taasi miyay u oggolaanaysaa qof jecel Liverpool ama Manchester United?
Waa inaan sugnaa si aan u ogaanno waxa dhaca.
Laakiin dhammaantood, hubaal, ma cadda
Lucas Torreira ayaa ku guuldareystay inuu wax ka helo Atletico Madrid ilaa iyo haatan waxaana dib loogu yeeri karaa inuu markale baxo.
Sida laga soo xigtay Tuttosport, Arsenal ayaa qarka u saaran inay la kulanto Fiorentina oo dooneysa ciyaaryahanka khadka dhexe amaahda.
Heshiiska waxaa ku jiri doona qodob iibsi oo aan ka kici doonin € 11m (£ 9.7m).
Heshiis kasta oo dhaca wuxuu la degan yahay Atletico oo ku qanacsan heshiiskiisa amaahda oo la jaray.
Shkodran Mustafi ayaa lagu soo waramayaa inuu wadahadalo kula jiro Arsenal oo ku aadan suurtagalnimada ah inuu joojiyo qandaraaskiisa kooxda xilli hore.
Daafaca Jarmalka qandaraaskiisa haatan ayaa lagu wadaa inuu dhaco dhamaadka ololaha, laakiin waxaa jiray warar la isla dhexmarayo oo sheegaya inuu u dhaqaaqi karo bishan.
Maxaa hadda loogu fasaxay?
Sababtoo ah Arsenal waxay ubaahantahay boos kooxeed si ay Odegaard isla markiiba u diiwaan geliyaan.
Previous articleYaa bedelaya Macalinkii Chelsea ee la ceyriyay?
Next articleWasiirka arrimaha sirddoonka Israa’iil oo booqasho ku tegay Suudaan
Tiger Woods oo ah halyeyga ciyaarta Golf-ka ee dalka Mareykanka ayaa dhaawac halis ahi Talaadadi shalay kasoo gaaray, shil baabuur oo uu ku galay...
Wakiilka Kylian Mbappe ayaa shaaca ka qaaday in weeraryahanka Paris Saint-Germain uu ku biiri lahaa Barcelona ka hor inta uusan lacag badan ugu dhaqaaqin...
Ciyaaryahankii hore ee reer Holland Dirk Kuyt ayaa kula taliyay xiddiga kooxda Manchester United Donny van de Beek inuusan ka welwelin mustaqbalkiisa madaama bilowga...
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u aheyd inay bangiga u jabiso da 'yarka Barcelona Ansu Fati. Sida laga soo xigtay Sport Witness,...
Dhaliyaha da’da yar ee Erling Haaland ayaa hoggaaminaya tartanka gool-dhalinta Champions League ee xili ciyaareedkan, waxaana uu saxeexay siddeed g;ool oo laba ka mid...
Wararka March 5, 2021
Wararka March 4, 2021
AUDIO March 4, 2021
Goobaha banaanbaxayaasha Sabtida isugu imaan doonaan oo la shaaciyay